Maxamed Bin Salmaan walaashii oo xabsi lagu xukumay - BBC News Somali
12 Sebtembar 2019
Image caption Maxamed Bin Salmaan
Amiirad Sucuudiyad ah ayaa lagu xukumay 10 bilood oo xadhig dibad jooga ah oo waxa lagu helay in ay af-duubatay oo ay garaacday nin ka shaqaynayey guri kuwa raaxada ah oo ay Paris ka deganayd.
Xassa Bint Salmaan waa 43 jir waxaana dhalay boqorka Sucuudiga Salman Bin Cabdelcasiis.
Waxa lagu eedeeyey in ay amar ku siisay boodhi gaadhkeeda inuu garaaco nin ka shaqeeya cillad saaridda qasabadaha oo sida la sheegay sawirro kaga qaaday gurigeeda dhexdiisa.
Ashraf Ciid, oo ah ninka dacweeyey, ayaa sheegay in ninka boodhi gaadhka u ahaa ku qasbay inu uu Amiiradda cagaha ka dhunkado.
Muxuu Sucuudiga u daneynayaa fannaaniinta ugu caansan dunida?
Nin malaayiin dollar ku dhacay magaca boqortooyada Sucuudiga
Maanta ayaa maxkamad Faransiis ahi Amiiradda ku heshay dembi ah in ay gacan ka geysatay jidh dil iyadoo adeegsanaysa hub iyo in ay sidoo kale af-duub qof qayb ku lahayd.
Amiiradda oo hore waaran qabasho oo caalami ah loogu jaray, ayaa xukunka lagu riday iyada oo maqan, waxaana sidoo kale lagu ganaaxay 10,000 Euro. Hase yeeshee, iyadu hore ba way u beenisay eedahaa loo haystay.
Ninkii boodhi gaadhka u ahaa oo la yidhaa Raani Saciidi, ayaa isagana lagu xukumay sideed bilood oo xabsi dibad joog ah iyo 5,000 Euro oo ganaax ah.
Bishii Sebtember 21016 ayaa Ashraf Ciid waxa loogu yeedhay aqal ku yaal dabaqa shanaad cimaarad kuwa qaaliga ah oo ku taal Avenue Foch ee magaalo madaxda Faransiiska, si uu u hagaajiyo qasabad jabtay.
Ninkaa shaqaalaha ah oo dhalasho ahaan Masri ah ayaa sheegay in uu sawirro uun ka qaaday qolka maydhashada ee loogu yeedhay inuu qasabadda u hagaajiyo.
Laakiin Amiiraddu waxay sida la sheegay ka cadhootay markii ay aragtay in meesha uu sawirayey muraayad ku taallay muuqeedu ka soo baxay. Hase yeeshee xaashida dacwadda waxa ku caddayd in ay markiiba u yeedhay Saciidi oo ay amar ku siisay inuu garaaco isla markaana qol ku xidho.
Mar ayaabay amiiraddu sida la sheegay ku qaylisay "eyga dil, nolol ba ma istaahilee".
Saciidi waxa uu maxkamadda bishii July u sheegay in uu malqay Amiiradda oo i soo gaadh ku dhawaaqaysa, markuu ku soo cararayna uu arkay Ciid iyo iyada oo telefoonka isku haysta.
"Waan qabtay oo aan ka awood roonaaday, maan garanayn wuxuu Amiiradda u sheeganayey" ayuu yidhi, waxaanu farta ku fiiqay in ninkaasi doonayey inuu sawirrada Amiiradda iibiyo.
In Amiirad sawirro laga qaadaa sharciga Sucuudiga waa ku dembi.
Hase yeeshee qareennada difaacayey Amiiradda ayaa sheegay in ay shaki leedahay in maalmo ka dib uu ku noqday guriga isaga oo sita qaan sheeg qiimaheedu yahay 21,000 Euro.
Waa tuma Amiirad Xassa
Warbaahinta dawladda Sucuudiga ayaa Amiirad Xassan ku amaantay adeegyada aadamenimo iyo u ololaynta xuquuqda dumarka.
Waxa la sheegay in ay maalmo kooban ka dib dhacdadaa ay Faransiiska ka tagtay, hase yeeshee Amiiradda su'aalo ayaa laga weydiiyey eedaha loo haystay.
Bishii Maarij 2018 ayaa garsoore Faransiis ahi waaran qabasho ah u jaray, waxaanay taasi ku qasabtay in aanay Sucuudiga ka bixin.
Qareenkeeda, Emmanuel Moyne, ayaa sida la sheegay yidhi Amiiraddu diyaar ayay u ahayd in ay maxkamadda kaga qayb gasho khadka Skype-ka.